स्मृति दिवस Archives - Lokpati.com
Tag - स्मृति दिवस
‘भाइ मात्र नभएर मिल्ने साथी पनि थियो’ : गङ्गा दाहाल
सानोमा भाइ एकदमै जिज्ञासु थियो, नयाँ कुरा देख्यो कि जान्नैपर्ने, सिक्नैपर्ने उसको स्वाभाव थियो । प्रकाश सानोमा नयाँ कपडा किन्नै मान्दैनथ्यो । नयाँ लुगा लगाइदियो कि खोलेर फालिहाल्ने, त्यो चाहिँ अहिले पनि झल्झली याद आउँछ । मैले...
इतिहास/सभ्यता • स्पेशल
प्रकाश दाहाल साकारको जीवनी
अहिले सम्झँदा यस्तो लाग्छ, उनी आफ्नो जीवनमा कहिल्यै किशोर हुन पाएनन्, बालकबाट सिधै युवा भए । सक्रिय राजनीतिक जीवनका कारण लालनपालनमा मैले बाबुका रुपमा उनीमाथि न्याय गरिनँ, गर्न सकिनँ ।
कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को सम्झनामा दीप प्रज्वलन
भरतपुर, १३ जेठ । साहित्यकार तथा वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकको १७ औं स्मृति दिवसको अवसरमा साेमबार साँझ भरतपुरमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ । प्रेस संगठन चितवनद्वारा भरतपुरको चौविसकोठीमा आयोजित दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा...
मदन स्मृति दिवस : यी हुन् रोचक चार स्मरण
मेरो झोलामा खुकुरी थियो। मेरो मुटु ढुकढुक गर्‍यो। अब के गर्ने, भाग्ने कि ? तर मदनजी उभिनु भयो। अनि, तिनीहरुलाई पहिल्यै सोध्नुुभयो ‘कताबाट आउनु भएको ? अब कताबाट निस्कने, तिनीहरुले छक्क परेर हेरे, बोल्न पनि सकेनन्। एक छिनपछि एक...
भण्डारी-आश्रित स्मृति दिवस : मदन भण्डारीकाे निधन कि हत्या ?
काठमाडौं, ३ जेठ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएको २६ वर्ष भएको छ।
कम्युनिष्टहरु नागरिकबाट चुनिएर मात्र सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भण्डारीले नागरिकको...
मनमोहन अधिकारी : कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुँदा उनी जेलमा थिए (जीवनी)
राणाशासनको अवधिमा शिक्षाको महत्त्व बुझेका परिवारका सदस्य शिक्षा आर्जन गर्न भारततिर जाने गर्थे। भारतीय जनताले अंग्रेज शासनविरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि गरेको आन्दोलनको प्रभाव त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली युवामा पनि पर्‍यो।...
‘फुटपाथको जिन्दगीमा रमाउँथ्यो प्रकाश’
७ मंसिर २०७५, शुक्रबार
कहिलेकाहीँ लाग्छ, ‘प्रकाशको बारेमा जस्तो गलत प्रचार गरियो, ऊ बिल्कुल त्यस्तो थिएन । आज उनी हामीसँग छैनन्, म घरिघरि सोच्छु, ‘समाजले प्रकाश भाइप्रति किन यति धेरै अन्याय गरेको होला ? उनका राम्रा काम र अनुकरणीय देन किन ओझेल पारिएको...
प्रकाशको नशा-नशामा देश र पार्टीको चिन्ता थियो
सानैदेखि प्रकाश ज्ञानी स्वभावको थियो । नयाँ–नयाँ काम गर्न ऊ एकदम इच्छुक हुने उसको स्वभाव थियो । केही पनि काममा ऊ पछाडि नहट्ने, जस्तोसुकै काम गर्न पनि तम्सिने उसको बानी थियो । वास्तवमा हाम्रो शिक्षा त्यति सजिलो भएन । कहिले चितवन...
‘हिलोमा फुलेको कोमल थियौ प्रकाश’
अब त हाम्रो प्रेमको चिनो छोरा पनि ठूलो भयो, बुबा भन्न सक्छ । तिम्रो तस्वीर पहिचान गर्न सक्छ । हेर्छु, एकातिर राष्ट्रको लागि योगदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सँगसँगै छोराहरुलाई असल नागरिक बनाउने कर्तव्य पनि । तिम्रा यादहरुले...
प्रकाश दाहालको चर्चित लेख : ‘बन्दुक बोकेर मर्न तयार हुँदा कहाँ थियौ साथी ?’
मेरो नाम प्रकाश दाहाल हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन आयोजक समितिको सदस्य। नयाँ परिचय पुष्पकमल दाहाल‘ प्रचण्ड’को सचिवालयको सदस्य। यसबाहेकका अन्य परिचय गौण हुन्। मेरा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारहरु यी परिचयका अगाडि गौण...
विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा बनेको वार्ता टोलीमा को-को छन् ?
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्षका विद्यार्थीबीच झडप
विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ता गर्न सरकारी वार्ता टोली गठन
घुस लिएको रकम भुइँमा फालेर भागे गाउँपालिकाका अध्यक्ष
नेप्सेले फुकुवा गर्‍याे सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंकको शेयर कारोबार
अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट ५ लाख २७ हजारकाे मृत्यु
पत्रकार विकास श्रेष्ठ पक्राउ
८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक
देउवाद्वारा डा.उप्रेतीको निधनप्रति दुःख व्यक्त
अधिकार माग्नेलाई जेल हाल्ने काम निरंकुश शैली हो : राजेन्द्र महतो
बाजुराको कोल्टिमा पहिलो पटक बस पुगेपछि स्थानीय खुसी
न्याय माग्न अदालतमा जान्छु : कोमल वली
भारत र सिंगापुरबाट ३०/३० हजार टन मल भित्रियो
महिला लघुवित्तकाे शेयर रजिष्ट्रारमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड नियुक्त